Wararkii Ugu dambeeyay: Qarax Addis Ababa ka dhacay iyo Itoobiya oo xirtay saraakiil Shirqool maleegayay.
Thursday November 12, 2020 - 09:16:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Booliska Federaaliga Itoobiya ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan hal ruux uu ku dhaawacmay qarax miino oo ka dhacay buunddo hoosteed, saraakiisha xabashida waxay meesha ka saareen in qaraxan uu cilaaqo laleeyahay dagaallada culus ee ka socda gobolka Tigray.
Dad goobjoogayaal ah ayaa wakaaladaha wararka usheegay in ay maqleen jugta qarax aad uweyn kadibna ay arkeen ciidamo goobta ay wax ka dhaceen isku gedaamay.
dhinaca kale wasaaradda difaaca Itoobiya ayaa sheegtay in ay fashilisay isku day ladoonayay in weeraro looga geysto gudaha taliska ugu sarreeya ciidamada xabashida.
Mas'uuliyiinta Itoobiya waxay xaqiijiyeen in ay xireen 17 sarkaal oo militari ah kuwaas oo lagu eedeeyay khiyaano qaran iyo la shaqeynta Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega, iyadoo ay socdeen dagaallada gobolka ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo mucaaradka.
Raadiyaha iyo Telefeshinka itoobiya oo soo xiganaya mas'uuliyiin melleteri ayaa sheegay in 17 sarkaal oo millateri ah la xiray iyaga oo diyaarinaya dhul barwaaqo u ah Golaha Milatariga Jabhadda Xoreynta Dadweynaha ee Tigreega ujeedkuna yahay in ay weerar ku qaadaan Ciidamada Difaaca Qaranka sida ay hadalka udhigeen.
Raadiyaha ayaa soo xigtay Guddiga Booliska ee Federaalka isagoo sheegaya in saraakiisha la xiray ay ku kaceen khiyaano qaran iyagoo abuuray xaalado uwanaagsan Jabhadda Tigreega kadib markii ay jareen nidaamyadii isgaarsiinta ee u dhaxeeyay Taliska Waqooyi iyo Taliska Dhexe.
marka lagasoo tago sheegashada katimid dowladda Itoobiya ayay wariyaal mucaaradsan Abiy Axmed waxay baraha bulshada ku faafiyeen xogo kuwaan udhow oo ah in nidaamka Addis Ababa uu ka badbaaday inqilaab ay maleegeen jeneraallada ugu sarreeya ciidamada kadibna uu iclaamiyay dagaal si uu udaboolo halista uu lakulmay.
Gobolka Tigreega waxaa wali ka socda dagaalo u dhexeeya ciidamada xabashida iyo jabhaddan mucaaradka ah ee sida aadka ah uhubaysan dagaalkaas oo horseeday in dad aad u tiro badan ay ka barakacaan gobolka iyo gobolka deriska la ah ee Amxaarada waxayna malaayiin ruux xabashi ah ufirxanayaan dhanka dalka Suudaan.